BlueStacks emulator မတပ်ဆင်အဘယ်ကြောင့်
BlueStacks software ကို emulator - Android app များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်များအတွက်အစွမ်းထက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအများကြီးအသုံးဝင် features တွေရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သည်စနစ်ကမတတျနိုငျ။ BlueStacks တောင်းဆိုအလွန်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်ပြဿနာများပင်တပ်ဆင်ကာလအတွင်းစတင်ကြောင်းအစီရင်ခံပါပြီ။ BlueStacks BlueStacks နှင့်2ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်မယ့်နားလည်ပါစေသော။
အဆိုပါ emulator တစ်ဦးထပ်တူလျှောက်လွှာများပါဝင်သည် BlueStacks
Google က-အကောင့်အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်သတင်းအချက်အလက်ရဲ့ login ပြီးနောက်အညီအမျှရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သို့မှသာမျိုးစုံပစ္စည်းများမှအသုံးပြုသူများကိုဆကျသှယျဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ လျှောက်လွှာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏ကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်: ဂိမ်းတိုးတက်မှု, မှတ်စုများနှင့်သင်က Google account ကိုဝင်နှင့်သူတို့ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ applications များပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ညှိအခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ။
အဆိုပါ emulator BlueStacks အတွက်ကီးဘုတ် layout ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
BlueStacks ကို install ပြီးနောက်လျှောက်လွှာကွန်ပျူတာကီးဘုတ်သို့မဟုတ် Laptop ကိုကနေတဆင့်ထိန်းချုပ်သလဲ? က default ။ သို့သော်ဒေတာ entry ကိုဤအမျိုးအစားသည်အမြဲတမ်းမှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ သင် password ကိုရိုက်ထည့်ရန်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြောင်းရန်တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်, အ layout ကိုအမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့မဟုတ်ဘူး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ input ကိုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာသည်။
ကျနော်တို့ cache ကိုအစီအစဉ်ကို BlueStacks သတ်မှတ်ထား
ငွေသားဂိမ်း - က application ကိုအောင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးမျိုးသောဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့အထူး archive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ စံ devices တွေကိုအန်းဒရွိုက် (ဖုန်းများ, တက်ဘလက်) သုံးစွဲဖို့, လျှင် cache ကို Google ကန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်အလိုအလျှောက် mode ကိုသတ်မှတ်ထားသောကွောငျ့, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမပြဿနာလျက်ရှိ၏။ အဆိုပါ emulator BlueStacks အတူလုပ်ကိုင်သောအခါ, အခွအေနေအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်သုံးစွဲသူများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် cache ကို install လုပ်ရန်ရှိသည်။
BlueStacks emulator တွေနဲ့စတင်အသုံးပြုသူက Play ကိုစျေးကွက်ကနေသင်အကြိုက်ဆုံး apps များရှာဖွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ရှိရာအဓိကင်းဒိုးခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ရှာဖွေရေး box ထဲမှာနာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါသင်က username နှင့် password ကိုလုပ်ဖို့လိုအပျသောပေါ်လာမှာပါ။ ဤသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းအချိန် setup ကိုစတင်မိတ်ဆက်သောဒေတာများဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ login နဲ့စကားဝှက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးကဲ့သို့ပင်မှန်ကန်သောဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပရိုဂရမ်တခုခွင့်ပြုချက်အမှားအပေါ်အလေးအနက်ဆိုသည်။
အဘယ်ကြောင့် BlueStacks မျှအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါသည်
BlueStacks emulator - အန်းဒရွိုက် applications များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်များအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦး-ဖော်ရွေ interface ကိုရှိပါတယ်, နှင့်ပင်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာက၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုနားလည်လို့ရပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးများနေသော်လည်း program ကိုမြင့်မားတဲ့စနစ်ကလိုအပ်ချက်ရှိပြီးမကြာခဏအမျိုးမျိုးသောပြဿနာများရှိပေါ်ထွန်း။ တဦးတည်းမျှမျှတတဘုံပြဿနာ - ကအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်။
အမြစ် - က Android system ပေါ်တွင်မဆိုအရေးယူခွင့်ပြုစည်းမျဉ်းများအထူးအစုံ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအခွင့်အရေးများကိုထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ Root မရရှိနိုင်လျှင်, သူကဤလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အချို့သောအလုပ်လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ BlueStacks, မည်သည့် Android ဖုန်းနှင့်ဝသကဲ့သို့, ကအပြည့်အဝအခွင့်အရေးများရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Analogue BlueStacks ရွေးချယ်ခြင်း
အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို emulator, အန်းဒရွိုက် applications များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အားလုံးလိုအပ်သော features တွေတပ်ဆင်ထားသော - တလက် BlueStacks တွင်။ အခြားတွင်ပြုလုပ်အတော်လေးခက်ခဲ software ကို operating system ကိုအရင်းအမြစ်များကိုအများကြီးစားဖြစ်ပါတယ်။ Blyustaks အတူလုပ်ကိုင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုသူများအေးခဲနေသောအမျိုးမျိုး bug တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
BlueStacks အားလုံးလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအသုံးပြုသူပံ့ပိုးခြင်း, အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်း operating system ကို emulates ။ ၏သင်တန်း, အစီအစဉ်ကိုအားကောင်းတဲ့စမတ်ဖုန်း၏လုပျငနျးတက်ကြွလာသည်, မဟုတ်ရင်ကအားနည်းနေနှင့်ဘတ်ဂျက်ကိရိယာ၏စစ်ဆင်ရေးကနေကွဲပြားမည်မဟုတ်, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အဖြစ်အများအပြားအရင်းအမြစ်များကိုယူသင့်ပါတယ်။
BlueStacks အတွက် interface ဘာသာစကားကိုပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို
BlueStacks အသုံးပြုသူနီးပါးမည်သည့်တပ်မက်လိုချင်သောအပေါ် interface ဘာသာစကားကိုပြောင်းခွင့်ပြု, ဘာသာစကားမျိုးစုံထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ကို Android ပေါ်အခြေခံပြီးသော emulator ၏ဗားရှင်းသစ်၌ဤ setting ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ option ကိုသငျသညျကို install နေကြသည်သို့မဟုတ်ပြီးသား installed သောလျှောက်လွှာ၏ဘာသာစကားကိုမပြောင်းပါဘူးကွောငျးကိုဖျောပွခကျြခငျြးတန်ဖိုးရှိ BlueStacks အတွက်ဘာသာစကားကိုပြောင်းပါ။
25000 BlueStacks အမှား
BlueStacks emulator - တစ်ရှုပ်ထွေးအစီအစဉ်နှင့်ကံမကောင်းကွဲပြားခြားနားသောအောင်မြင်မှုများကြောင့်သိပ်ထူးခြားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ emulator ၏ installation ကာလအတွင်း အကယ်. ပြတင်းပေါက်အောက်ပါအကြောင်းအရာများနှင့်အတူပေါ်လာသော: «မှားယွင်းနေသည် 25000 ", installation သင့်ရဲ့ system ပေါ်တွင်အမှုဖြစ်လျှင်, တော့ဘူး။ ရဲ့ကျနော်တို့ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။
အဆိုပါ BlueStacks app ထဲမှာမှတ်ပုံတင်အားဖြင့်
အသုံးပြုသူများမကြာခဏမေးခွန်းမေးပါ: "ဒီမှတ်ပုံတင်ပေးသည်ကိုဘယ်လို BlyuStaks အတွက်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အားသာချက်များ?" ။ အစပိုင်းမှာထိုကဲ့သို့သောမှတ်ပုံတင်ရေးကိုပထမဦးဆုံးစတင် BlueStacks မှာအရပျကိုကြာပါတယ်။ Google အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်, BlueStacks အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်ပေါ်လာများနှင့်တစ်ဦးတူညီနာမကိုအမှီရှိပါတယ်လိမ့်မယ်။ အသစ်တစ်ခုကို Google ပရိုဖိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန်သေချာပေါက်မဟုတ်ပါဘူး, သင်ရှိပြီးသားတဦးတည်းပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။
အဆက်မပြတ်ကို install နှင့် software ကိုဖယ်ရှား, များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်ပင်သူတို့တစ်ဦးစီမလိုအပ်သောဖိုင်များ, registry ကို entries တွေကို, အပြင်အဆင်များထွက်ခွာကြောင်းသတိပြုမိကြသည်မဟုတ်။ ထိုကဲ့သို့သောတ္ထုကိုပရိုဂရမ်များ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်သန့်ရှင်းရေးမှခွင့်ပြုမထားဘူးကြောင်း built-in စံ Windows ကိုအင်္ဂါရပ်။ ထို့ကွောငျ့, Third-party tools များအသုံးပြုရမည်။
BlueStacks ကို install များအတွက် System ကိုလိုအပ်ချက်များကို
အဆိုပါ device ကို Android ပေါ်မှာအခြေခံသည်သုံးစွဲသူအများစုမှာဖြစ်တယ်, အရာများစွာကိုအတွက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သည်ငါတို့အဘို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့သည်အသုံးဝင်သော applications များကိုသုံးပါ, အရှင်နေ့စဉ်အထောက်အအတွက်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet အောင်, ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းများကိုကစား။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုတစ်ဦးကို PC ဗားရှင်းရှိသည်, ထို့ကြောင့်အန်းဒရွိုက်ကိရိယာသို့ပြောင်းရန်ရန်ရှိသည်မှအတင်းအဓမ္မ။
အဆိုပါ emulator BlueStacks သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
အခုဆိုရင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်က Android operating system ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအတုယူ software ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သုံးစွဲသူအများဆုံး BlyuStaks ရွေးချယ်ပါတယ်။ သူမသည်ပင်အထူးအသိပညာရှိခြင်းမဟုတ်လူတွေကိုပါကပါဝါကိုနားလည်သော Android device ကိုမှအဖြစ်နီးစပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသော interface ကိုရှိပါတယ်။
သငျသညျ BlueStacks နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည့်အခါမကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာဂီတ, ပုံနဲ့အများကြီးပိုဖြစ်နိုင်သည်။ အရာဝတ္ထု Upload လုပ်ပါကမည်သည့် Android ဖုန်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့တူညီသောလမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ ဤဖိုင်များကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါမူကား, အသုံးပြုသူများသည်အချို့သောအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။
မှန်ကန်စွာကို set up BlueStacks
အသုံးပြုသူကသူ၏အလုပ်အတွက်ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရစေခြင်းငှါ, သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို BlueStacks emulator အပေါ် install လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ အများစုကတော့ကနေစွမ်းဆောင်ရည်ခံရ - အားနည်း PC ကိုမူအရသို့မဟုတ်အခြားပြေးအစီအစဉ်များနှင့်အတူအပြိုင်၌, "လေးလံသော" ဂိမ်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကထွက်ခွာ, ဘရိတ်, ဆွဲထားနှင့်အခြားဒုက္ခဖြစ်ပျက်ဒီလို့ပဲ။
BlueStacks - အန်းဒရွိုက် applications များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အားကောင်းတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။ ယင်း၏လူကြိုက်များနေသော်လည်းကြောင့်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာအတွက်ခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာတစျခုမှာအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်: "Google ဆာဗာများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။ " သငျသညျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပုံကိုစဉ်းစားပါ။ BlueStacks BlueStacks Download ဘယ်လို« bug တွေကို fix ဖို့သင်ဤအမှားကြုံတွေ့ရပါက, လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အချိန်ကိုစစ်ဆေးခြင်း "Google ဆာဗာချိတ်ဆက်မရပါ - သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သတ်မှတ်အချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
BlueStacks Analogues နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, Windows operating system နှင့်အတူအကောင်းဆုံးလိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်။ သို့သော်အချိန်ကနေအချိန်ပေးဖို့အစီအစဉ်၏ installation ကို, startup လုပ်စစ်ဆင်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပြဿနာများရှိပါသည်။ မကြာခဏအသုံးပြုသူများ app ကိုရိုးရှင်းစွာ boot မတစ်ဦးအဆုံးမဲ့စတင်ခြင်းလည်းမရှိကြောင်းအစီရင်ခံပါပြီ။ ဒီများအတွက်အကြောင်းပြချက်အများကြီးမရှိကြပေ။
BlueStacks တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအဘယ်ကြောင့်အနက်ရောင် texture ရှိပါတယ်
အားလုံး၎င်း၏အသုံးဝင်သော features တွေရှိနေသော်လည်း emulator BlyuStaks အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာအတွက်ခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြဿနာများသည်အသုံးပြုသူများမကြာခဏလျစ်လျူရှုသောစနစ်, များအတွက်မြင့်လိုအပ်ချက်များကြောင့်ပေါ်ထွန်း။ သူ့ဟာသူအသုံးပြုပုံ program ကိုလည်းအချို့သောချို့ယွင်းချက်ရှိတယ်။ သငျသညျ BlueStacks install လုပ်ပါလျှင်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်အတူတာဝန်များကိုနှင့်အတူရငျဆိုငျ, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်ရုတ်တရက်အနက်ရောင် screen ပေါ်မှာရောင်စုံဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲအချို့ကိုသင်ထိန်းသိမ်းရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စေရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။